AFRICOM oo digniin ka bixisay in Ciidamada Mareykanka laga saaro Somalia - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka AFRICOM oo digniin ka bixisay in Ciidamada Mareykanka laga saaro Somalia
AFRICOM oo digniin ka bixisay in Ciidamada Mareykanka laga saaro Somalia
War kasoo baxay Taliska Ciidanka Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano (Africom) ayaa laga digay halista ka dhalan karta hadii laga saaro Ciidamada Mareykanka ka jooga Soomaaliya, hadalkaas oo uu shalay shaaciyay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Afhayeenka Ciidamada Mareykanka ee AFRICOM Col. Chris Karns ayaa sheegay in Cidiamada Dowladda ay sameynayaan horumar dhanka Amniga ah, balse halis amni ay Al-Shabaab ku hayaan Soomaaliya, isla markaana weli loo baahan yahay taageero Caalami ah.
Afhayeenka oo u warramay Washington Examiner ayaa shaaca ka qaaday in halista Al-Shabaab ay noqon karto qatar mustaqbalka ku wajahan Mareykanka waa sida uu hadalka u dhigay.
Madaxweyne Trump, Aqalka Cad iyo la-taliyeyaasha dhanka Amniga Qaranka Mareykanka ayaa haatan waxaa ay diyaarinayaan qorshooyinka ka bixitaanka Ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya, iyadoo la eegayo waqtiga suuragalka ah.
Dowladda Mareykanka ayaa waxaa ay kamid tahay dowlaha taageera soomaaliya, waxaana dalka ka jooga 650 ilaa 800 oo askari, kuwaas oo Ciidamada Dowladda ka taageera dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Previous articleDad ku dhintay qarax ka dhacay Shabeellaha Dhexe
Next articleDHAGEYSO: Warka Duhur ee Radio Risaala 15-08-2020